Dabaaldegii Labaad Eedeysanuhu wuxuu qirayaa dambi | Waxaan ka socdaa mac
Dhowr sano ka hor muranka ayaa ka dhashay marin habaabin ay dhowr qof u galeen akoonnada iCloud ee dadka caanka ah, gaar ahaan Hollywood, halkaas oo ay ku keydsadeen sawirro fara badan. in badan oo iyaga ka mid ah ayaa lagu sameeyay dhar aad u yar, oo aan la odhan gabi ahaanba waa qaawan yihiin. Qaar ka mid ah sawirradan waxaa lagu daabacay 4chain halkaasna waxay ku faafaan internetka oo dhan. Wixii markii hore umuuqday dhibaato xaga amaanka ah ee iCloud, waxaa aakhirkii la muujiyay in dhibaatadu ay ka timid dadka iyagu laftooda dhagaystay e-mayl been abuur ah oo, iyagoo iska dhigaya Apple iyo Google, ay codsadeen furaha sirta ah ee iCloud si loo xaqiijiyo inay iyagu yihiin milkiilayaasha saxda ah .
Dhowr bilood ka hor ayaa kii ugu horreeyay ee eedeysanuhu qirtay dambiga oo uu galay xabsiga. Midka labaad ee eedeysanayaasha Edward Majerczyk ayaa qirtay dambiga sida kuwa kale ee ku lug lahaa fadeexadii 2014 ee loogu magac daray Celebgate. Edward wuxuu qirey helitaanka akoonada caanka ah iyo xatooyada sawirada. Laakiin markale iyo sidii eedaysanuhii hore, Edward wuxuu kaloo ku andacooday in uusan marna ka xadin sawiradan si uu ugu baahiyo internetka, laakiin ay tahay qof saddexaad oo aan wali la aqoonsan oo soo geliyay sawirrada internetka.
Edward wuxuu eedeynayay inuu u soo diro emayl isaga iska dhigaya iCloud iyo Gmail marin u helaan koontooyinka daruuraha in ka badan 300 oo qof intii u dhaxeysay Nofeembar 2012 iyo Ogosto 2014. Dhacdadani waxay su'aal gelisay amniga adeegga noocan ah, waxayna ku qasabtay labada shirkadood inay ku daraan laba xaqiijin mar kasta oo adeegsaduhu rabo inuu helo xogtooda, habkaas oo fariin ugu diraya aaladda isticmaalaha lambarka sirta ah ee loo baahan yahay si loo helo marka aad gasho midka aad badanaa isticmaasho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Dabaaldegga Labaad Eedeysanuhu wuxuu qirayaa dambi
Apple wuxuu sii daayay Safari Falanqaynta Teknolojiyada 14